Iman model - Wikipedia
Zara Mohamed Abdulmajid
(1955-07-25) 25 Luuliyo 1955 ( 66jir)
Moodel, jilaa, ganacsade
(g. 1973; furiin 1975)
(g. 1977; furiin 1987)
(g. 1992; geeriyooday(tay) 2016)
Iman (magaceeda dhalasho Zara Mohamed Abdulmajid;Af Soomaali: Zara Maxamed Cabdulmajiid; 25 Luulyo 1955) waa moodel Soomaaliyeed, jilaa iyo ganacsade, waxaa sidoo kale lagu yaqaan shaqadeeda samafalka ah.
5 Nolosha shakhsi
6 Xiriirinta dibedda
Nolosha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Iman wuxuu ku dhashay Zara Mohamed Abdulmajid ee Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Waxaa markii dambe lagu magacaabo Iman markii ay awoowe u ahayd. Iman waa gabadhii Marian iyo Maxamed Abdulmajid. Aabaheed wuxuu ahaa diblomaasiyiin iyo Safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey Sacudi Carabiya, hooyadeedna waxay ahayd dhakhtarka dumarka, Waxay leedahay afar walaalo ah: laba walaalo ah, Elias iyo Fiisalal, iyo laba gabdhood oo yaryar, Idil iyo Nadia.
Iman wuxuu la noolaa awoowgeeda inta lagu guda jiro sanadaheeda. Markii ay da'deedu ahayd afar jir, waxaa loo direy iskuul dhigasho oo ku yaal Masar, halkaas oo ay ku qaadatay inta badan caruurnimadeeda iyo qaan-gaarnimada. Ka dib kacdoonkii siyaasadeed ee Soomaaliya, ayuu aabihiis aabihiis dib ugu celiyay dalkoodii. Dhaqtarkiisa, iyada hooyadeed iyo walaalaheed ayaa markii dambe u safray Kenya, kadibna waxay ku biireen aabaheed iyo walaashii yar. Halkaas, waxay cilmi siyaasadeed ka baratay Jaamacadda Nairobi mudo gaaban,1975.
Iman waa Muslim. Waxay ku fiican tahay shan luqadood: Soomaali, Carabi, Talyaani, Faransiis iyo Ingiriisi.
Xirfadle[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Moodaynta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Iman oo ka tirsan Metropolitan Opera oo habeenkii furay 25-kii September 2006.Iyada oo weli ku jirta jaamacadda, Iman waxaa soo helay sawirqaade Maraykan ah Peter Beard, kadibna wuxuu u wareegay Maraykanka si uu u bilaabo xirfad cusub. Qodobkeedii ugu horeeyay wuxuu ahaa Vogue sannad ka dib 1976-kii. Waxay markiiba soo degtay qaar ka mid ah joornaalada ugu caansan ee daboolaya, waxay isku dhistay in ay noqoto bastoolad.
Iman wuxuu ahaa mid guuleysi degdeg ah ku leh adduunka moodada, inkasta oo ay nafteeda ku adkaysatay in ay aragtidu yihiin kaliya kaliya ama caadi ahaan soomaali. Waxay noqotay muusig loogu talagalay naqshadayaasha caanka ah, oo ay ka mid yihiin Halston, Gianni Versace, Calvin Klein, Issey Miyake iyo Donna Karan. Waxay ahayd mid aad u jecel Yves Saint-Laurent, oo markii hore ku tilmaamay "haween riyo".
Inta lagu guda jiro 14 sano oo ah qaabka ugu sarreeya, Iman ayaa sidoo kale la shaqeeyay sawir qaadayaal badan oo la yaab leh, oo ay ku jiraan Helmut Newton, Richard Avedon, Irving Penn iyo Annie Leibovitz.
Philanthropy[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Intaa waxaa dheer in ay maamusho shirkadeeda quruxda caalamiga ah, Iman sidoo kale waxay si firfircoon uga qayb qaadataa dhowr hawlood oo samafal ah. Waxay hadda u tahay afhayeenka Barnaamijka Ilaalinta Cunugga, oo si dhow ula shaqeeya Sanduuqa Difaaca Carruurta.  Waxay sidoo kale u adeegtaa safiir u ah Badbaadinta Carruurta, waxaanay firfircooneyd sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta adeegyadooda gargaarka ee gobolka Bariga Afrika. Intaa waxaa dheer, Iman wuxuu la shaqeeyaa Mashruuca Baaxadda leh si uu u dhammeeyo ganacsiga caalamiga ah ee macdanta iskahorimaadka ah. Waxa ay qayb weyn ka qaadatay ololaha guud ee ka soo horjeeda dheemanka dhiigga iyada oo la joojiyay qandaraaskeeda iyada oo dhererka dhirta ah ee De Beers ka baxday khilaafka anshaxa.
Abaalmarinta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Muddadii ay jirtay xirfadeeda mudnaanta dheer iyo shaqadeeda, Iman waxay heshay abaalmarino badan. 7-dii Juun 2010, waxay heshay abaalmarin naqshad nololeed oo casri ah oo ka timid Golaha Dhaqanka ee Maraykanka (CFDA), oo ah abaalmarin gaar ah oo loogu talagalay "qof shakhsi ah oo qaabka saxiixa uu saameyn weyn ku yeeshay qaabka." Iman wuxuu doortay saaxiibkeed, actress iyo model hore Isabella Rossellini, si ay u soo bandhigaan abaalmarinta. Iyada oo la xirxiray qoortii Giambattista Valli oo leh afar armaajo dheeman oo waawayn oo gacmeed kasta ah, Iman ayaa uga mahad celiyay waalidiinteeda "inay iga dhigto qoorta in ka badan gabar kasta oo kale meel kasta oo caalamka ah".
Nolosha shakhsi[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Iman iyo ninkeeda David Bowie sanadkii 2009. wuxuu markii ugu horreysey ku guursaday da'da 18 jir ee ganacsadaha dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed, madaxa fulinta Hilton, Guurku wuxuu dhammaaday dhowr sano ka dib markay u soo guurtay Mareykanka si ay u daba-galaan xirfad cusub.
Sanadkii 1977-kii, Iman wuxuu xusuustay jilaa American ah Warren Beatty. Sannadki sannadkaas, waxay ku hawlantahay ciyaaryahankii kubadda kolayga Mareykanka Spencer Haywood. Gabadhooda, Zulekha Haywood, waxay dhashay 1978-kii. Labada isqaba ee Febraayo 1987.
24-kii Abriil 1992, Iman wuxuu guursaday muusikada Rocky David Bowie xaflad gaar ah oo ku taal Lausanne, Switzerland. Arooska ayaa mar dambe lagu soo koobay 6-dii Juunyo ee Florence, Talyaaniga. Waxay leeyihiin hal gabadh, Alexandria Zahra Jones, oo dhashay 15kii August 2000. Iman sidoo kale waa hooyo u dhashay wiilka Bowie ee guurka hore, Duncan Jones. Labada carruurba waxay leeyihiin magaca qoyska ee Bowie. Iman iyo qoyskeeda waxay ugu badnaayeen Manhattan iyo London. Markii Bowie uu dhintay 10kii Jannaayo 2016, iyada oo carmalkeeda ka dhigtay, waxay ku qaddarisay isaga oo ah "halganka waa run, laakiin sidoo kale waa Ilaah."
Xiriirinta dibedda[wax ka badal | wax ka badal xogta]
↑ Iman, Peter Hill Beard, David Bowie, I Am Iman (Universe Publishing, 2001), p. 15.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Iman_model&oldid=206069"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Oktoobar 2020, marka ee eheed 00:14.